Hosodoko :: Misokatra ny fampirantiana “Nofy an-tsary” eny Andraharo • AoRaha
Hosodoko Misokatra ny fampirantiana “Nofy an-tsary” eny Andraharo
Azo tsidihina eny amin’ny Ivon-toerana Fondation H, eny Andraharo, nanomboka tamin’ny sabotsy lasa teo, ny fampirantiana « Nofy an-tsary » entin-dRakotoarivony Tahina hatramin’ny 4 jona 2021. Misy ny famandrihana manokana isaky ny sabotsy ho an’ireo maniry hisafidy an’io andro io ka hianoka ny fijerena an’ ireo hosodoko mampisaintsaina miisa sivy.
Loko marevaka sy manintona no hisaloran’ny tabilao tsirairay avy, amin’ny alalan’ irony endrika antsoina hoe “acryliques sur toile” irony. Mitaratra ny ampaham-piainan-dRakotoarivony Tahina ny sary tsirairay, hany ka toa zary ahatsapana fihetsehampo ny fandinihana azy ireo.
Tsikaritra, ankoatra an’ireo sanganasa sivy ireo, ny fisian’ ny tabilao iray ifangaroan’ny tany mena, rano, lakaoly ary simenitra ao amin’ity rindrin’ ny tranon’ny Fondation H, eny Andraharo ity. Nohazavain’i Tahina fa “tanjona ny hanehoana karazana asam-pamoronana amin’ny mpiara-belona… Tsy afa-misaraka amin’ny aingampanahy ny hosodoko ary ilaina ny manonofy amin’ny fiainana hahafahana mandroso”.
Fantaro ny Covid-organics na CVO